Ungaziguqula kanjani izinketho zokungeneka kwezinhlelo zokusebenza ku-iOS 15 | Izindaba ze-IPhone
Ungaziguqula kanjani izinketho zokufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ku-iOS 15
U-Angel Gonzalez | 20/07/2021 10:00 | iOS 15
Izinhlelo zokusebenza ze-Apple bezilokhu zivelela amandla azo amakhulu wokwenza ngokwezifiso ku- izici zokufinyeleleka. Ukuqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile bangakuthokozela konke okuhlangenwe nakho kubalulekile ekufezeni ukwaneliseka okufunwa kuCupertino. Vuselelwa ngemuva kokuvuselelwa, kwethulwa izinketho ezintsha ezithuthukisa ukufinyeleleka kohlelo olusebenzayo uqobo. Empeleni, IOS 15 yethula ukucushwa kokukhethwa kukho kokufinyeleleka kwezinhlelo zokusebenza. Lokho, kungenzeka ukuthi wenze ngezifiso izici zohlelo lokusebenza ngalunye, ngakunye, ukugwema ukumiswa komhlaba wonke okungalungile kuzo zonke izinhlelo zokusebenza. Sikukhombisa ukuthi uwenza kanjani lo msebenzi.
Lungiselela uhlelo lokusebenza lwezinketho zokufinyeleleka ngohlelo lokusebenza ku-iOS 15
Imisebenzi ye- ukufinyeleleka ziningi futhi zihlukahlukene kakhulu. Noma kunjalo, okubaluleke kakhulu yilezo ezikuvumela ukuthi ulungiselele ukuthi isikrini, umbhalo nokunyakaza kukhonjiswa kanjani kulo lonke uhlelo lokusebenza. Eminye imisebenzi izengezo ezengezwe ohlelweni ukuvumela ukufinyelela kuhlelo lokusebenza ukuze lusebenze ngangokunokwenzeka. Ukuba khona kwenani elikhulu lokukhubazeka kwamadigri ahlukene noma ngisho nokuthandwa lapho kubukwa okuqukethwe kwenza lezi zinketho zibaluleke ngokwengeziwe.
IOS 15 ifaka phakathi inketho yokwenza ngezifiso uhlelo lokusebenza lokukhetha ukufinyelela ngokusebenzisa uhlelo, isisekelo sokwenza ngokwezifiso kulokhu. Ukufinyelela ithuluzi kuyadingeka ukuthi ube ne-beta ye-iOS 15 kungaba ngeyonjiniyela noma i-beta yomphakathi ngoba bonke bethula le ntsha. Okulandelayo, sizofinyelela kuzilungiselelo> ukufinyeleleka futhi esigabeni esijwayelekile sizobona inketho Izilungiselelo ngohlelo lokusebenza ngalunye.
Iwebhusayithi entsha yokuFinyeleleka kwe-Apple ikhombisa izinzuzo ze-iOS ne-iPadOS
Uma sesingaphakathi, singangeza izinhlelo eziningi njengoba sifuna. Uma sichofoza kuzo sibona zonke izinketho esingazilungisa phakathi kwazo: umbhalo ogqamile, izilawuli ezinqenqemeni, ukuguqulwa kombala, ukwanda kokuqhathanisa, hlukanisa ngaphandle kombala, ukuhlanekezela okuhlakaniphile, ukunciphisa ukunyakaza nokuningi.
Lapho senza izinguquko, zizokwenziwa zisebenze kuhlelo lokusebenza ngalunye esiluguqulile. Ukususa ukucushwa, vele ubuyele kwimenyu lapho lezi zinhlelo zokusebenza zivela khona bese uslayida leyo esifuna ukuyisusa ngakwesobunxele bese ucindezela inkinobho ethi Susa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » Ungaziguqula kanjani izinketho zokufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ku-iOS 15
Isikrini esisebenza njalo se-iPhone 13 sizoba yi-ace up sleeve sayo
Ukuvuselelwa kwe-iPhone, i-Apple Watch, i-HomePod ne-Apple TV manje kuyatholakala